Dooni sidey tahriibayaal oo ku qarqoontay badda dalka libiiya,tiradda dadka ku dhintay iyo wararkii ugu danbeeyay.
Wednesday June, 20 2018 - 00:54:30
Sunday January 07, 2018 - 11:47:10 in by salman abdi
Ugu yaraan siddeed qof ayaa ku dhintay badda 84 kalena waa la soo badbaadiyay ka dib markii doon ay la socdeen ay ku degtay badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga, Waxaa kaloo la la’yahay 25 kale oo doonta saarnaa sida ay sheegtay hay’ad dalka Spian laga leeyahay, Shilkan dhacay ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee sanadkan cusub dhaca iyadoo dariiqaasi badda aad loogu dhamaanayay mudo dheer.
Ku dhowaad 34,000 oo qof ayaa ku dhamaaday amaba lagu waayay biyaha Talyaaniga iyo Liibiya u dhaxeeya ilaa sanadkii 2000, Ciidamada ilaalada xeebaha ayaa sheegaya in qalabka wax lagu ilaaliyo ee diyaaradaha ay kula socdeen doomaha ay saaran yihiin dadka lasoo tahriibiyo. Waxaa hadda weli socda baadigoobka loogu jiro dad badan oo doonta saarnaa.
Midowga Yurub war uu dhowaanta soo saaray ayaa lagu sheegay in dadka Yurub u haajiraya ay tiro ahaan hoos u dhacday sanadkii la soo dhaafay, Sanadkii la soo dhaafay ee 2017-kii 3,000 oo qof ayaa ku haligmay badda iyagoo isku dayay inay Yurub gallaan, Hoos u dhacan ku yimid dadka Yurub u tahriibaya ayaa loo sababaynayaa xuduudaha oo si weyn loo adkeeyey, Sidoo kale hoos u dhacan waxaa qayb weyn ka qaatay heshiiskii Turkiga lala galay ee ahaa inuu ka hortaga dadka dalkiisa ka soo galaya Yurub.